तपाई भारु नोट साट्न नपाएर दुःखित हुनुहुन्छ ? खुशिको खबर पढ्नुहोस् - E ALL NEPAL
HomeAll PostsUncategorizedतपाई भारु नोट साट्न नपाएर दुःखित हुनुहुन्छ ?...
तपाई भारु नोट साट्न नपाएर दुःखित हुनुहुन्छ ? खुशिको खबर पढ्नुहोस्
काठमाण्डौँ, पुस २७ । नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारू नोट सटहीको लागि छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि बुधबार (आज) भारत जाने भएको आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ ।
भारू सटहीका लागि छलफल गर्न भारतले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएको थियो। भारतले परराष्ट्रमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सटहीको मोडालिटी र पक्रियाको बारेमा छलफल गर्न को – को कहिले आउने भनी जानकारी मागेको थियो ? राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ३ अर्ब ३६ लाख ९० हजार भारू छ । तर त्यो भन्दा बाहिर १० अर्बभन्दा बढी भारू पाँच सय र एक हजारका नोट रहेको अनुमान गरिएको छ।